Buddhism » မိုးပြာဆိုသည်မှာ ဒီလိုပါ။	36
ဗုဒ္ဓ၏တပည့်ရဟန်းသံဃာများသည် ဗုဒ္ဓသတ်မှတ်ခဲ့သော အဆင်းဖျက် သင်္ကန်းအရောင်များကို လည်း ကာလ၊ ဒေသအလိုက် အ၀ါ၊ နီညို၊ အပြာ၊ အနက် စသည်ဖြင့် ဆိုးခြယ်၍ မြန်မာ၊ ယိုးဒယား၊ သီရိလင်္ကာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီယားစသော ထေရ၀ါဒရဟန်းတော်များနှင့် တိဗက် ရဟန်းတော်တို့သည် အ၀ါ၊ နီညို စသည့်အရောင် သင်္ကန်းများဝတ်ဆင်ပြီး၊ တရုတ်မဟာယာန ရဟန်းတော်တို့သည် အ၀ါရောင်၊ အပြာရောင်သင်္ကန်းတို့ကို ၀တ်ဆင်ကြ ပါသည်။ ဂျပန် နိုင်ငံ ဇင်ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ရဟန်းတော်တို့သည် အပြာရောင်နှင့် အနက်ရောင် သင်္ကန်းတို့ကို ၀တ်ဆင်ကြပြီး ကိုးရီးယားမဟာယာန ရဟန်းတော်တို့က အပြာရောင်သင်္ကန်းကို ၀တ်ဆင်ကြပါသည်။
“ဘီလူးကြီး”ogre says: အယူလွဲရင်တော့….ဒိဠိ ပဲ
Ordinary Man says: အ၀တ်ကလူကို အသိပေးမှာမဟုတ်ဘူး အပြောကသာလူကို အသိပေးမှာ ဘယ်သူတွေဘာတွေဝတ်နေတာကို ကျွန်တော်တို့ ပြောနေဖို့လိုမယ်မထင်ဘူး သာသနာကွယ်ပတာ မကွယ်ပတာကိုရော ဘာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြမလဲ အဲဒီသာသနာဘယ်လောက်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေလဲ အဲဒီလှုပ်ရှားချက်ကြောင့် လူတွေမှာ ဘယ်လောက်ထိအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းနေစေသလဲ ဒါကို ကြည့်ရမှာ သာသနာဝင်တွေဘယ်လောက်များများ သာသနာအဆောက်အဦးတွေ ဘယ်လောက်ကောင်း လူအတွက်ကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီသာသနာဟာ အသက်ဝင်နေတယ် ရှင်သန်နေတယ်လို့ ပြောဖို့တော်တော်ခက်တယ်။ ၀တ်ဖြူစင်ကြယ်ပဲဝတ်နေနေ လူဝတ်ကြောင်နဲ့ပဲနေနေ ဖန်ဆွတ်ရေသင်္ကန်းပဲဝတ်နေနေ လူအတွက် အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတွေကို လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုလူကိုကျွန်တော်တို့အသိတိုးဖို့အတွက်လေ့လာသင့်တယ်။ အဲဒီလူကဘယ်ဘာသာဝင်ဘဲဖြစ်နေနေပါ ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ် မွတ်ဆလင်ပဲဖြစ် ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ် ထေရ၀ါဒပဲဖြစ်ဖြစ် မဟာယာနပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
“ဘီလူးကြီး”ogre says: မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သံသရာလွတ်ကြောင်းတရားများတွင် ပစ္စုပ္ပန် အကျိုးအတွက်
မောင်မိုးပြာ says: မိမိကိုယ်တိုင် ငရဲခံနေရသည့်အဖြစ်များကိုသတိရပါ။ မြန်မာပြည်မှာ အမှန်တရားကို မပြောရဲမဆို
ကြောင်ကြီး says: မိုးပြာကို
ကျိုးမှာကွဲ့..။ မိုးပြာဆရာတော် ဦးညာဏ၏ ရဲဝံ့ပြတ်သားမှုကို လေးစားပါသည်။ မိုးပြာဂိုဏ်းအမည်ခံ ရေးသားချက်များသည် ဆရာတော်ဦးညာဏ၏ ကိုယ်ပိုင်မူများလော၊ အခြားသူများ၏ ထင်မြင်ချက်များလော ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ သိလိုပါသည်။ အများသောအားဖြင့် ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်လျင် ကြက်တူရွေးကတော်တော် မယ်တော်က ကဲကဲဖြစ်တတ်လွန်းလို့ပါ။
Nan Shin says: မိုးပြာအကြောင်းကိုတော့ အထူးမငြင်းခုန်လိုတော့ဘူး။သူတို့ဟောတဲ့ အဓိက ဟောပြောချက်တွေကို
Ordinary Man says: Nan Shin ကိုတစ်ခုလောက်အကြံပြုပါရစေ။
True Answer says: နောက်ပိတ်ဆုံးပုံ (၀ါဒ) မှ လွဲပြီး အားလုံးသော ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံး
ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀အယူကို လက်ခံကြပါသည်။ နောက်ပိတ်ဆုံးပုံမှာ အားလုံးသော ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံး ၏
ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀ရှိသည်ဟူသော အယူနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအ၀န်းအ၀ိုင်းထဲ သို့ ၀င်ရောက်ခြင်း ၊ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။ မိမိအယူအဆကို လွတ်လပ်စွာမတင်ပြဘဲ-
ထေရ၀ါဒစာပေများကို စွဲယူလျှက် မိမိတို့ဝါဒအတွက် အကိုးအကား အထောက်အထားလုပ်နေခြင်းသည်ကားလည်းတဖက်…လုပ်နေသောကြောင့် မရိုးမသား ထင်ရောင်ထင်မှားလုပ်သော အယူဝါဒ အဖြစ် ယူဆပါသည်။ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက် http://mandalaygazette.com/64548/creative-writing
Moe Z says: ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ရုပ်တု (Idol) ကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး
True Answer says: ဗုဒ္ဓဟောကြားသော တရားတော်များကို international pali ဖြစ်စေ၊ Sanskrit ဘာသာနှင့်ဖြစ်စေ လေ့လာသူတိုင်း ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ကို သမုတိသစ္စာအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဟောကြားကြောင်း လက်ခံကြောင်း သိရှိနားလည်လက်ခံကြပါသည်။
ှုnternational တခြား မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖိုရမ်တွေလည်းရှိပါသည်။ ခင်ဗျားတို့အမြင်ကို လက်ခံမခံ စမ်းသပ်တင်ပြကြည့်ပါဦး။ ဓါတ်ပုံထဲကလို တကယ်ဖြစ်ချင်ရင် ဒီလိုဖိုရမ်မျိုးတွေထိ ပါဝင် ဆွေးနွေး ဆွဲဆောင်နိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။ တကယ့်က ခင်ဗျားတို့ဝါဒဟာ ဖြစ်တည်မှုသာ ပဓာန ၀ါဒ (ရုပ်ဝါဒ) ပြင်သစ်ပညာရှင်တစ်ဦးတင်ပြပြီးသာဝါဒပါ။ ဒီဝါဒကို ခင်ဗျားတို့က ငါ (သူတပါး) ၊ ယောက်ျားမိန်းမ ၊ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါအစွဲဖြုတ်တဲ့ ၊ ဗုဒ္ဓစကားလုံးတစ်ချို့ကို ယူသုံးပြီး အများကို ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် လှည့်ဖြားနေသည်ဟု ယူဆပါသည်။
lionking says: လောကမှာ ဒဿနတခုရဲ့ အတိမ်အနက်သိချင်ရင် ဒဿနပညာရှင်ရဲ့ ကာလ ဒေသ သမိုင်းနောက်ခံ အကြောင်းအရာတွေကို ကိုယ့်အသိနဲ့ နေရာတကာလိုက်ပြီးမတိုင်းပဲ ကျကျနနလေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှသာ ဘာဝါဒဖြစ်တယ်။ ညာဝါဒဖြစ်တယ် ပြောဖို့ သင့်ပါလိမ့်မယ်။ ရမ်းကြိတ်ရင်တော့ ရမ်းကြိတ်သူကို သေချာကျနစွာ လေ့လာထားသူက ဒီကောင်ဘာကောင် လဲလို့ သိသွားပြီ။ ရှင်ဥာဏရဲ့ ပစ္စုပ္ပန် ကံဒဿနကို မပြောနဲ့ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ(တောင်တွင်းကြီး)ရဲ့ ဒဿန တောင် မြန်မာပြည်ရဲ့ အထက်မြက်ဆုံးသော ရဟန်းပညာရှိ လူပညာရှိတွေဟာ ကျကျနန မသုံးသပ်ပဲ ဝိုင်းကြဉ်လိုက် ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကအပြုံးမပျက်ဘူး။ အေးဆေးပဲ။ သူကပညာရှိဆန်တယ်။ ငါရေးတဲ့စာဟာ လူတွေအတွက်အသုံးမတဲ့တော့ရင် အလိုလိုပျက်သွားလိမ့်မယ် လို့ရေးခဲ့ပြောခဲ့တာပဲ။ ဒါကို မသုံးသပ်ကြပဲ အနိုင်ကျင့် ပြီးဖြေရှင်းကြတယ်။ ဘယ်လောက်အနိုင်ကျင့်ကျင့် လူကို(ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ)ပဲ အနိုင်ကျင့်လို့ရမယ်။ သူ့ရဲ့ ဒဿကို အနိုင်ကျင့် လို့ မရဘူးဆိုတာ မြဲမြဲမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်။ လောကမှာ အပြစ်တင်မခံရပဲနဲ့ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမရဲ့ တရားဟာ လောကငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့သူတွေ အခုထိငြင်း ခုံကြတုန်းပဲ။ ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင် ဘုရားနဲ့ အခုခေတ်အလှမ်းဝေးလွန်းတာကြောင့် သမိုင်းအမှားအမှန်ခွဲခြားဖို့ ခက်လွန်းတာကြောင့် ယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ထွေပြားဝေဝါးနေကြတာပဲ။ အမှားအမှန်ကိုကိုယ့်ဘာသာချင့်ချိန်။ အရွယ်ရောက်လို့မှ ချင့်ချိန်ပြီး မခွဲခြားတတ်ရင် ဘာမှသိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ အားကြီးလို့ အနိုင်ကျင့်တတ်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှ မလုပ်တတ်တဲ့ ဘာသာဝင်တွေ မဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ရှင်ဥာဏဒဿနဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မနဲ့ အဆက်အစပ်ရှိတယ်ပြောပြော ဒါကပဲ ဘုရားတရားဖြစ်တယ်ပြောပြော ပြောသူကအရေးမကြီးဘူး လေ့လာသူက အရင် အသူဟာ ပြောသူအောက်ရောက်သွားမှာပဲ။ ဒါနားလည်ဖို့ပဲ။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဘုရားလဲလူပဲ လူထဲမှာဆိုရင် သူ့ခေတ်သူ့အခါက တော်သူတတ်သူ ထက်မြက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မှာပဲ။ ဒါပဲ။ ဘုရားဆိုတာ ရေးကြီးခွင်ကျယ်ကြီး မဟုတ် ဘူး။ လူ့လောကမှာ ဟောဒီနည်းအတိုင်းသာ နေကြ ထိုင်ကြ ပြောကြ ဆိုကြ လုပ်ကြ ကိုင်ကြရင် သာယာနိုင်တယ်လို့ ပြောသွားသူပဲ။
parlayar46 says: ဗုဒ္ဓအမည်ကို ခေါင်းစဉ်တပ် ယူသုံးရုံမျှဖြင့် ဗုဒ္ဓသာသာမဖြစ်ပါဘူး။
Nyan Phyo Myint says: လောက်ဟာ အိမ်သာထဲမှာရှိတာ အပြစ်တင်စရာမဟုတ်ပေမယ့်
ashinariya says: ယခုတင်ထားတဲ့ post တွင် အပေါ် နိဒါန်းစာတစ်ပိုဒ် ကျန်ရှိနေပါ၍ comment တင်ပြလိုပါက ၎င်း post နှင့်ကပ်လျှက် ဒုတိယအကြိမ်ဖြည့်စွက်တင်ထားသည့် post တွင် ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ပါသည်။
kai says: ခေါင်းစဉ်တူ ၂ခုဖြစ်နေလို့.. တပည့်တော် တခုကို ကော်မန့်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်..။ မကြာခင်ဖျက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်..။
mggwa says: ဒီလိုဆိုတော့လည်း မိုးပြာဆိုတာ မဟာယာနလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒကွဲတစ်ခုပဲပေါ့။ အဲဒီလို ကွဲကွဲပြားပြား ဖြစ်အောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တင်ပြလိုက်တော့တည်း ရှင်းသွားတာပါပဲ။ ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းဆို သင်္ကန်းအရောင် အ၀ါ၊ အနီ ကိ်ုပဲ လှေနံဓားထစ်မှတ်ထားကြတာ။ သူ့ကာလ၊ ဒေသ၊ အခြေအနေအရ သင့်တော်ရာဝတ်မှာပေါ့။ ဘုရားကခွင့်ပြုထားပြီးသားပဲ။ မြန်မာတွေထဲက အစွဲကြီးတဲ့သူတစ်ချို့က တရားမမြင်ပဲ သင်္ကန်းအရောင်မှာ လမ်းဆုံးနေကြတာကိုး။ အပြာရောင်သင်္ကန်းဝတ်လို့ မိုးပြာလို့ ပြောတာကိုး။ ကောင်းတယ်ဗျာ၊ အပြာရောင်ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေး သင်္ကေတအရောင်ပဲ။ လူတွေငြိမ်းချမ်းကြဖို့ အတွက်ပဲလို့ ထင်မိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းကြဖို့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထေရ၀ါဒတစ်ခုတည်းက အပိုင်သိမ်းချင်လို့ မရတော့ဘူးလို့ ခေတ်က တောင်းဆိုနေတာပါပဲ။
Nan Shin says: မိုးပြာအကြောင်းသိချင်ရင် အောက်ပါလင့်ခ်များမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ကျနော်အထက်မှာပြော
“ဘီလူးကြီး”ogre says: “မြန်မာတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းဆို သင်္ကန်းအရောင် အ၀ါ၊ အနီ ကိ်ုပဲ လှေနံဓားထစ်မှတ်ထားကြတာ။ သူ့ကာလ၊ ဒေသ၊ အခြေအနေအရ သင့်တော်ရာဝတ်မှာပေါ့။ ”
Ordinary Man says: ၀ိနည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။
lionking says: မတွေးတာတော့ မဟုတ်ဘူးကွ။ တွေးတော့တွေးတယ် အချော်တွေး အမျှော်တွေး အရော်တွေးတွေကလွဲရင် မတွေးတတ်လို့ပါ။ ကျကျနနတွေးတတ်အောင်သင်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှ ဗမာတွေ အနိုင်ကျင့်လိုစိတ်တွေပျောက်ကုန်မှာ။
kai says: ၀ိနည်းက.. ဂေါတမဗုဒ္ဓက. သူ့ဂိုဏ်းထဲဝင်ရင် ၀င်သူတွေလိုက်နာဖို့ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့.. စည်းကမ်းတွေလို့ထင်မိတယ်..။ သံဃာတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့..။
ဓမ္မကို.. ၀ိနည်းနဲ့.(.တော်တော်များများအပိုင်းတွေမှာ).. ညှိပြိး.. ဘုရားဟောစစ်မစစ်.. မှန်မမှန်တွက်လို့.. ရနိုင်တယ်..။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ၀ိနည်းက.. ရှေးက..ဘုရားလက်ထက်ကအတိုင်း.. အရင်းတ်ာတော်များများ ကျန်နေဦးမယ်..
mggwa says: (၀ိနည်းနှင့် အညီဝတ်ဆင်တဲ့ သင်္ကန်းနှင့် ရဟန်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေသေးသောကြောင့် အတန်ငယ်အားတက်မိပါကြောင်း…။။။။။) ဆိုတော့ ယခုခေတ်မြန်မာထေရ၀ါဒရဟန်းတွေရဲ့ ၀တ်ဆင်မှုဟာ ဘုရားလက်ထက်က ပုံစံအတိုင်းလို့ “ဘီလူးကြီး” ဘယ်လို အာမခံမလဲ။ အားလုံး အတူတူနဲ့ အနူနူပါပဲကွာ။ ” – – “က တစ်မူး မပိုချင်ပါနဲ့ လို့ပြောတော့ mggwa က ဂွကျတယ်ဖြစ်ဦးမယ်။ ဘုရားလက်ထက်ကအတိုင်း ဟုတ်မဟုတ်စူးစမ်းချင်သေးရင် ဖားအောက်တောရဆရာတော်ရဲ့ သင်္ကန်အကြောင်းဟောပြောချက်တွေ နားထောင်ကြည့်ဦး။ တကယ့်ဝိနည်းနှင့် အညီဝတ်ဆင်တဲ့ သင်္ကန်းနှင့် ရဟန်းတွေ့ချင်ရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၅၀၀ ကျော်က ကုလားပြည်ကိုသာပြန်သွားတော့ “ဘီလူးကြီး”ရေ။ မျှမျှတတတွေးမှပေါ့။
“ဘီလူးကြီး”ogre says: mggwa ပြောပုံအရဆိုရင်တော့
unclegyi1974 says: ရဲရဲတွေးတာကောင်းပါတယ်
Nyan Phyo Myint says: အရှင်ဒေ၀ဒတ် ထက် သာမယ့် ဦးဥာဏပါ။
ရာဇ၀င်လူဆိုး says: ခက်ကေ၇ာ သူကြီး၇ယ် …ကွန်.မန်.တွေကိုဖျက်တယ်…။ ကျူပ်ကတော. စာမှာပါတဲ.အတိုင်း မတူတဲ.အတွေးနဲ.နဲ. ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုေ၇းတာပါ..နောက်ဘ၀ဆိုတာမတွေးပဲ ဒီဘ၀ကိုပဲတွေးမယ်ဆိုရင် ကျူပ်ဒီလိုပဲလုပ်မှာ…ဖျက်ဗျာ ဖျက်… ကျူပ်တို. မလုပ်နိုင်တဲ. အလုပ်(ဆိုဒ်တစ်ခုထောင်ပြီး အကျိုးပြုနေတယ်ဆိုပြီး) ………မိုက်မိုက်၇ိုင်း၇ိုင်းကွန်မန်.တွေတောင်မဖျက်ပဲထားရင် ….
ရာဇ၀င်လူဆိုး says: ဆောဒီး သူကြီး.. ပို.စ် ခေါင်းစဉ်မှားဖွင်.မိလို. ညနေက ကျူပ်တို.ကွန်.မန်.တွေ ၅၀ ကျော်ကို ၂၀ ကျော်အောင်သူကြီးဖျက်လိုက်တာလားလို. ..တောင်းပန်တယ် သူကြိး ကျူပ်မှားလိူ.။ (ကျူပ်မှားလို.တောင်ပန်ရဲတယ် သူကြိး) မှားတဲ. ခေါင်းစဉ်က မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာကြောင်.ပြာ.. ဆိုတာနဲ… မိုးပြာဆိုသည်မှာ ဒီလိုပါ ..မှားသွားတာ….. ကျူပ်တွေးတာတော. မဲနယ်ဆိုးလို. ဖြစ်ပါသည်လို. ကျူပ်ထင်တယ်… လူတွေကို တကယ်အကျိုးပြုချင်တဲ. လူတွေက စကားတွေနဲ. ဖောင်မဖွဲ..ဘူး။ သူတို. လုပ်နိုင်တာ ၊ လုပ်သင်.တာ ၊ လုပ်ပေးနိုင်တာကို လုပ်သွားကြတာ။ ခုတော. မိုးပြာဖြစ်ဖြစ်၊ ဖိုးကြာဖြစ်ဖြစ် အချိန်ကုန်ခံ ၀ါဒလိုက်ဖြန်.နေသလို ထင်တယ် …
moegyothwar says: အော်… မိုးပြာရောင် ၀တ်စုံကိုး.. ဘုန်းကြီး က တရုတ်သိုင်းကမလို့လားလို့ပါ။ ကြောင်တောင်တောင်အတွေးနဲ့ ဘာသာရေးခုတုံးလုပ် မျောက်ဇာတ်ခင်းကြဖို့ထင်ပါ့။
apulay says: ငါးပါးသီလကိုတောင်မှ ဇောက်ထိုးမိုးမြှော် ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ မိုးပြာတွေရေ အတက်ကြူးရင်ဘီလူးဖြစ်တတ်သတဲ့နော် ။ သတိလေးလဲထားပါဦး ။
Nyan Phyo Myint says: သံကို သံဖျက် သံချေးတက်တဲ့ မိုးပြာ
Ordinary Man says: မိုးပြာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူသားအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် အဲဒီအယူအဆကို ကျနော်တို့လေ့လာသင့်တယ် လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တယ်
KING says: ကျုပ်ကတော့ ခင်ဗျားတို့လို ဘာမှ သိပ်မပြောတတ်ဘူး
aye.kk says: ကျမအဖေကမဟာယာနကိုးကွယ်သူပါ ၊ စူဠာမဏိဘုရားဟာကောင်းကင်မှာသာ ကိန်းဝပ်စံပါယ်လျှက်ရှိနေတာကိုယုံကြည်တဲ့သူပါ ၊ စဠာမဏိဘုရားကိုသာဘဲကိုးကွယ်တဲ့သူပါ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသူတော်စင် အနွယ်ဝင်တွေယုံကြည်မြတ်နိုးမှုနဲ့
aye.kk says: နေတဲ့အပြာရောင်ဝတ်စုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိသာလျှက်ရှိပါတယ် ၊အ၀ါရောင်ဝတ်စုံကမဟာယာနကိုး
ariyathitsa says: မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ
yan soe says: မိုးပြာက ဘာကြောင့်ပြာသလဲ ဆိုတော့ ငရဲသွား ချင်လို့ ပြာတယ် ပြောရမှာပဲ …